ललितपुरलाई आर्थिक केन्द्रविन्दु बनाउन पहल गर्छु - Karobar National Economic Daily
ललितपुरलाई आर्थिक केन्द्रविन्दु बनाउन पहल गर्छु
query_builderOctober 12, 2017 12:41 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility295
सविन श्रेष्ठ अध्यक्ष ललितपुर उद्योग बाणिज्य संघ
तपाईं ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भइसक्नु भयो फेरि कार्यकाल दोहो¥याउन खोज्नुको कारण के हो ?
ललितपुर उद्योग बाणिज्य संघको विधानले एकपटक अध्यक्ष भइसकेपछि पुनः एकपटक नेतृत्वको दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधानले नै दुई पटकसम्म अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरेकाले म यसै अनुरूप अगाडि बढेको हुँ ।
वर्तमान कार्यकालमा म र मेरो कार्यसमितिले धेरै नयाँ र राम्रा काम गरेको छ । त्यसको निरन्तरताका लागि पनि मैले कार्यकाल दोहो¥याउनुपर्छ भन्ने लागेर प्रतिस्पर्धामा आएको हुँ । वर्तमान कार्यसमिति मात्र नभएर बाहिर रहनुहुने सवै साथीले मलाई कार्यकाल दाहो¥याउन दवाव दिनुभएको छ । साथीहरूको भावना र वर्तमान कार्यसमितिले गरेका कामलाई निरन्तरता दिन मैले नेतृत्व दोहो¥याउन चाहेको हुँ ।
तपाईंले चुनाव जित्ने आधार के हुन् ?
म सवै साथीहरूको इच्छा र भावनालाई समेट्दै कार्यक्रमहरू लिएर प्रतिस्पर्धामा आएको छु । वर्तमान कार्यकालको अनुभव पनि आगामी कार्यकालका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । योसँगै अनुभव र नयाँ जोश भएका व्यवसायीको प्यानल मसँग छ । मेरो कार्यकालमा शुरू भएका होमस्टे, युवा तथा महिला उद्यमीका कार्यक्रमलाई व्यापकता र निरन्तरता दिने मेरो योजना छ ।
ललितपुरलाई आर्थिक केन्द्रविन्दुका रूपमा अगाडि बढाउन मैले काम गर्नेछु । ५० औं स्थापना दिवस तथा स्वर्ण जयन्ति सफल बनाउन पनि मैले जित्नुपर्छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भिमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण, व्यवसायीहरूको समस्या एक ठाउँबाट समाधान गर्न ‘वान स्टप सप’, व्यवसायीलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भिज्ने वातावरण तयार गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादकत्व अवार्ड दिने, सांस्कृतिक र पर्यटकीय जिल्ला घोषणा गराउनेलगायतका एजेन्डा नै मेरा जित्ने आधार हुन् ।
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा सवै व्यवसायी समेट्न त सक्नु भएको छैन नि ?
ललितपुरमा २० हजारभन्दा बढी व्यवसाय छन् भनिएको छ । तर खासमा दर्ता भएका फर्महरू १५ हजार मात्रै छन् । त्यसमा पनि एकै व्यक्तिका धेरै वटा नाममा दर्ता भएर भएको हो । खास व्यवसायी भनेका ८ हजार रहेका छन् । त्यसमध्ये हाम्रो संघमा २ हजार सदस्य आबद्ध रहेका छन् । यसमा के हो भने सबै संघमा आवद्ध नहुन पनि सक्छन् ।
तर पनि ८ हजारमा २ हजार आवद्ध भएको २५ प्रतिशत व्यवसायी त आवद्ध रहेका छन् । अन्यलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौ । उपत्यकामा धेरै संस्था हुने भएकाले नबुझेर वा आवश्यकता नपरेर पनि आवद्ध नभएको हुन सक्छ । २ वर्ष अगाडि १ हजार २ सय मात्रै थिए अहिले २ हजार पुगेका छन् । हाम्रो प्रयास शाखा विस्तार र सदस्य बढाउन प्रयास हुने छ ।
ललितपुरलाई त हस्तकलाको शहर पनि भनिन्छ, तर यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन नि ?
अवश्य पनि ललितपुर हस्तकलाको शहर हो । निर्यातका लागि अहिले पनि पहल गरिररहेका छौं । विभिन्न संस्था मार्फत विदेश लैजाने गरेका छौं । बाहिरबाट पनि नेपाल ल्याएर तालिम र गोष्ठीहरू गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारसँग पनि मिलेर काम गरिरहेका छौं । विदेशी संस्थासँग मिलेर नयाँ बजार खोज्ने प्रक्रियासमेत गरिरहेका छौं ।
लाओस, भियतनाम अवको हाम्रो नयाँ बजार हो । नेपालमा हस्तकला बढी मात्रमा मूर्ति रहेकाले बुद्ध धर्म मान्ने देशमा बढी निर्यातलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेका छौं । अहिले चीनका धेरै शहरका संघ–संस्था तथा व्यवसायीहरूसँग सहकार्य भइरहेको छ । भुटान, तिब्वतलगायत क्षेत्रमा पनि अहिले विशेष कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । समग्रमा भन्नु पर्दा ललितपुर हस्तकलाको शहर हो ।
तपाईंले जित्नुभयो भने संघमा तुरुन्तै देख्न सकिने ५ परिवर्तन के–के गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा संघलाई सवैलाई स्वीकार्यता बनाउने जिम्मेवारीलाई पूर्णरूप दिन्छु । दोस्रो आर्थिक वातावरणलाई अझ उत्कृष्ट गराएर धेरेलाई रोजगारी दिने काम गर्छु । अरु जिल्लाको तुलनामा ललितपुरमा व्यापार व्यवसाय गर्न सहज छ । हस्तकलालाई केन्द्र विन्दु बनाएर थप काम गर्दा तेस्रो परिवर्तन देख्न सकिनेछ ।
लुभुमा परम्परागत कपडा उत्पादन भएको छ यसमा केही नयाँ योजनासहित काम हुन्छ भने पाँचौं व्यवसायीलाई सहज र आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने छु ।
ललितपुर आर्थिक केन्द्रविन्दु ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ